Alarobia, Martsa 2, 2011 Alakamisy 3 martsa 2011 Douglas Karr
Ao amin'ny kaonferansa Webtrends Engage any San Francisco aho ary manana sary an-tsary sy atiny iray taonina hozaraina aminao mandritra ny herinandro vitsivitsy. Tsy maintsy namoaka avy hatrany ity horonantsary ity aho…
Webtrends dia mitsambikimbikina mihoatra ny mpifaninana rehetra amin'ny famoahana azy ireo amin'ny volana aprily ho avy izao - izay misy ny seha-pifandraisan'ny mpampiasa HTML5, ny traikefan'ny mpampiasa vaovao, ny fifamatorana mafy kokoa amin'ny Mobile sy Social Media, ary ny fampidirana ny PostRank tahirin-kevitra.
Jereo pikantsary mahavariana misimisy kokoa ao amin'ny Analytics 10 tranokala. Raha manontany tena ianao hoe fanesoana fotsiny ve ireo… Tsia! Ny ekipan'ny Webtrends dia nampiseho ny endriny mivantana nandritra ny fihaonambe!
Tags: Vorona voalohanyboky marketingtsoratadidy sosialy
Ahoana ny fomba ahazoana ranom-pifandraisana ao amin'ny Youtube